चुनावी युद्ध मैदानमा डा. अजयको विजय सुनिश्चित | NewsMissile.com
चुनावी युद्ध मैदानमा डा. अजयको विजय सुनिश्चित
Newsmissile November 14, 2017 राजनीति, समाचार0Comment
काठमाडौ । आगामी मंशीरमा हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको राप र ताप जतिजति नजिकिदै छ उतिउति त्यो रापिलो तापक्रम बढ्दो छ डा. अजय क्रान्ति शाक्यमा ।
सर्बसाधारण जनताको काखैमा हुर्केका, सबैको पीर मर्कालाई आफ्नो पीरमर्का झै ठान्ने नेता डा. अजय क्रान्तिको अगाडी जतिसुकै मच्चिएर वहादुर आएपनि पराजय भोग्नुको कुनै विकल्पै छैन।
किनकि उनी हरेक कुनाकाप्चा रहेका जनतासँग भिजेर त्यहीको मुहारमा नौलो र सुन्दर भविष्यको सपना देख्ने र देखाउन चाहनेवाला कर्मठ युवा अनि देशकै वफादार क्रान्तिका सम्वाहक हुन्।
त्यसैले उनी अहिले अति विपन्नवर्गका पानी र घाम छल्ने कुटीदेखि ठूला-ठूला घरानियाँका महलसम्मका सकल जनता समक्ष अमूल्य मताधिकार प्रदान गरि दिन अपिल गर्दै घरदैलोमा दिनलाई रात र रातलाई दिन नभनी २४ सै घण्टा लागि परेका छन्।
साँच्चै नै डा. क्रान्तिले चाहे जस्तो र खटेजस्तो गरी सारा जनताले उनलाई साथमा साथ र हातमा हात दिने हो भने जनताको जीउने कलामा जीवनको लाइफस्टाइल नै बदलि दिने उनमा खुबी छ।
कसरी भने डा. अजय क्रान्ति शाक्यमा गीत संगीतदेखि मिडिया सञ्चालक, ठूला उद्योगी व्यवसायी लगाएत राजनीतिक्षेत्रमा उत्तिकै दख्खल भएका (मल्टीमाइन्डेड्) चर्चित अनि बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति हुन्।
जन्मदै जगतमा अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध अद्भूत क्रान्ति ल्याउने र देशलाई नौलो युगमा प्रवेश गराउँने मूल उद्देश्य हो डा. अजय क्रान्तिको । सायद यही भाव बुझेर नै होला उनको बुवा आमाले उनको नाम अजय क्रान्ति शाक्य राख्न पुगे ।
अहिले विपक्षी दलका भनौ या डा. अजय क्रान्तिका प्रतिष्पर्धीहरु कुनाकुनाबाट काँडा बनेर उत्तिकै सलवलाईरहका छन् । तर पनि यो क्रान्तिको अगाडी तिनीहरु खरानी घसेर हिड्नेमा कुनै दुईमतै छैनन् ।
हुन त भन्ने गरिन्छ राजनीतिमा झूठा आश्वासन वाँडिन्छन् र झुठकै खेती गरिन्छ तर काठमाडौ क्षेत्र नं. ९ का सचेत जनताले बुझिसकेका छन् कि डा. अजय क्रान्ति यस्तो व्यक्ति कदापी होइनन् भनेर । त्यैभएर अजय क्रान्तिले ती जनताका भनाईलाई सत्य सावित गरेर देखाउन मात्र केही समय बाँकी छ।
डा. अजय क्रान्ति शाक्यले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा विज्ञान, प्रविधि, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा विकास सल्लाहकारका कार्यभार समेत सम्हालीसकेको अनुभव छ ।
अहिले क्षेत्र नं. ९ का जनताहरुले भन्ने गरेका छन् कि, “हामीहरु डा. अजय क्रान्ति शाक्यको विजय र्यालीमा समाहित हुनमा आतुर छौ ।”
डा. अजय क्रान्ति शाक्य यो पनि वाचा गर्छन कि “मेरा लागि क्षेत्र नं. ९ का जनता प्राण भरेको जीवन सो सरह हो र त्यसैले समाज परिवर्तन र उनीहरुको भविष्य निर्माणको निम्ति म पनि प्राण आहुति दिन कुनैपनि वेला तत्पर छु ।”
Previous “सिन्की अचार” मा विजय र रिश्माको तात्तातो अभिनय
Nextमलेसियामाथि नेपालको सानदार जित